Poly နှင်းခေါင်မိုးအလင်းလူမီနီယမ်လက်ကိုင်နှင့်အတူပို - တရုတ် Richina
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: H482
ယေဘုယျအား Length: 4720mm
ဦးခေါင်းအရွယ်အစား: * 150mm 630
PC ကွန်ပျူတာ + ကို ABS ခေါင်မိုးထွန်ခြစ်ဓါး, အရွယ်အစား 630 * 150mm composited
လွယ်ကူသောဆီးနှင်းဖယ်ရှားရေးတို့အတွက် wide angle ဓါးနှင့်အတူနှင်းမိုးထွန်ခြစ်
အလူမီနီလက်ကိုင် anodized3အပိုင်းပိုင်းနှင့်အတူနှင်းမိုးထွန်ခြစ်
ယေဘုယျအားအရှည် 4720mm ဖြစ်ပါသည်
စံပြရှာဖွေနေ ခေါင်မိုးနှင်းခြစ် ထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း? ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ လူအားလုံးတို့သည်တယ်လီစကုပ်နှင်းခေါင်မိုးထွန်ခြစ်အရည်အသွေးကိုအာမခံနေကြသည်။ ကျနော်တို့လူမီနီယမ်၏တရုတ်မူလအစစက်ရုံနှင်းခေါင်မိုးထွန်ခြစ်ကိုင်တွယ်ဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
2-ပုဒ်မလက်ကိုင်နှင့်အတူ 22 လက်မအရွယ်နှင်းရေမှုတ်များ